Me ọzọ ... WWII
Me ọzọ ... WWII 3 afọ 6 ọnwa gara aga #278
Ọ bụ m ọzọ. M bụ nnọọ spitballin 'ma na-eche ma ọ bụrụ na e nwetụrụla mgbalị na-eme a WWII ngalaba. N'ihi na ọtụtụ akụkụ, ọ dịghị onye nwere mmetụta nke na-efe efe ọ bụla ụgbọ elu si oge ahụ. Ọ ga-eleghị anya a dum ọhụrụ ahụmahụ, ndabere anya ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ si Mach 2 - 3, na-enwe mmetụta nke ọdịda ochie / nnukwu ewepụghị n'elu kama ọdịda mucho / fasto na angled redio. M ugbu a m na n'ihi na otu onye ga-enwe a obere ụgbọelu nsoro. (Ndị Corsair anyị nwere ugbu a bụ a otutu fun. M nwere a wụrụ awụ nlereanya nke onye nke agba atụmatụ.)
Me ọzọ ... WWII 3 afọ 6 ọnwa gara aga #288
M 1000% na ihu ọma nke a!
Me ọzọ ... WWII 3 afọ 6 ọnwa gara aga #297
ONE puku pasent? !!!!!? Ha ha, ọ ga-ọzọ ihe COMIN 'Ụzọ Anyị!; -]
Me ọzọ ... WWII 3 afọ 6 ọnwa gara aga #328
yeah m ukwuu n'ime ofufe jumbos maka My VA .... ma m MEE n'anya WWII Birds